Zvakanakira kushandisa Big Data muCommerce | ECommerce nhau
Zvakanakira kushandisa Big Data muCommerce
Big Data ishoko rinotsanangura kuwanda kwedata, ese akarongeka uye asina kurongeka, ayo anofashukira mabhizinesi mazuva ese. Asi haisi iyo huwandu hwe data chii chakakosha. Izvo zvakakosha neBig Data ndizvo zvinoitwa nemasangano nedata. Big Data inogona kuongororwa kuti iunzwisise inotungamira kune zvisarudzo zviri nani uye zvine hungwaru bhizinesi kufamba.
Asi chinhu chinonyanya kufadza nezve iyi data yekuunganidza system ndeyekuti inogona kuve neyakaitika pachitoro chepamhepo kana kutengeserana. Nekuti inogona kuenderana nezvako chaicho zvaunoda uye neyako application unokwanisa kuvandudza kukura kwavo kubva zvino zvichienda mberi. Izvi zvakaita semhedzisiro yemamwe mabhenefiti kune ino yakasarudzika kirasi yemakambani.
Kuunganidza yakawanda data uye kutsvaga zvinoitika mukati me data zvinobvumidza mabhizimusi epamhepo kufamba zvakanyanya nekukurumidza, zvakanaka uye zvine mutsindo. Izvo zvinovatenderawo bvisa nzvimbo dzedambudziko matambudziko asati abvisa purofiti yako kana mukurumbira. Chinhu chinova chimwe chezvinonyanya kukosha matambudziko panguva yayo yekutanga-kumusoro uye inotevera kusimudzira.
1 Big Dhata: mhedzisiro yayo kudhijitari yekutengesa
2 Wedzera mitengo
4 Yakakura uye iri nani kurongeka mukutungamira kweyekutengesa zvemagetsi
5 Chii chingafarire isu mukushandisa kwako?
Big Dhata: mhedzisiro yayo kudhijitari yekutengesa
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kusimbiswa kuti panguva ino zvakaoma kwazvo kuunganidza, kuchenesa, kusanganisa uye kuwana yepamusoro-soro data nekukurumidza. Kusvika pakuti pakupedzisira zvinotora nguva yakareba kushandura mhando dzisina kuumbwa kuita mhando dzakarongeka uye maitiro ayo data. Seimwe yezvinhu zvakakosha kwazvo mukuitwa kwayo mukirasi yemakambani.
Nepo kune rimwe divi, zvisina kukosha zvakanyanya inyaya yekuti iyo inonzi data hombe ipfungwa inosunganidzwa zvakanyanya nekutenga kwevanoshandisa vatengi vekambani yedhijitari. Saka kuti iwe unzwisise zvirinani, Big Data inobvumidza makambani tarisai kune vako vangangove vatengi; ziva maitiro avo uye zvavanotarisira kuitira kuvakwezva kuchitoro chako chepamhepo. Pamusoro pezvimwe zvakateedzana zvekufunga kwehunyanzvi.
Kubva pane iyi nzira iwe uchaona kuti ndezvipi zvimwe zvinokonzeresa mukirasi ino yemakambani. Zvimwe iwe unogona kunge uchitoziva, asi vamwe vane chokwadi chekukushamisa iwe kubva ikozvino zvichienda mberi.
Imwe yemhedzisiro yayo ndeyekuti mukupedzisira iyi dhata system inowanzo kukanganisa mitengo yezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Mune mamiriro akajairwa uko kukwikwidza kuri iko kurongeka kwezuva uye nekudaro kunoda kugadzirisa mamiriro ari mukambani yako kubva zvino zvichienda mberi.
Ehezve, iwe haugone kukanganwa kuti mushure mezvose, vashandisi vanogara vachitsvaga chakanakisa chigadzirwa uye sevhisi uye ndiyo iyo yaunofanirwa kuvapa panguva yakakodzera. Iko kunokosha kwazvo kuti iwe upe hunhu urwo vatengi vari kutsvaga kuitira kuti vafambise kutengesa pasi pehunyanzvi hwakanyanya muzvikamu zveichi chiitiko. Uye mune ino pfungwa, hapana mubvunzo kuti hombe data inogona kuita mupiro wakasimba kuti uwane ichi chishuwo chauinacho.
Kune rimwe divi, chinhu ichi chakabatana zvakanyanya nezvido zvezvitoro zvepamhepo kana mabhizinesi uye panowanikwa data hombe kubva kune izvozvi. Sei? Zvakanaka, zvakapusa, sezvo iri yakadzika kuongorora data, inomuka se batsira kuona dambudziko izvo zviri kugadzirwa pane yakasarudzika chikuva. Ndiine chinangwa mupfungwa kuti ndinogona kukupa mhinduro kwayo nekukurumidza sezvazvinogona.
Sezvazviri nenyaya yekuti dhata hombe hurongwa hwakavakirwa pakupa basa rakanaka kumutengi kana mushandisi. Nekuti haugone kukanganwa kuti zviri kuramba zvichinetsa kuchengetedza sevhisi yakanaka. Kunyanya zviparadzanise kubva pamakwikwi uye wedzera kukosha kune zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Zvekuti pakupedzisira iwe unogona zvakare kana uri pachinzvimbo chiri nani kuitira kuti kuburikidza nekushandisa kwako data rekutenga iwe unogona kupa zvakafanana kana zvirinani zvinyorwa kana masevhisi pane ayo akagadzirwa kubva kumakwikwi epamhepo makambani kana zvirinani mumakwikwi akavhurika.
Yakakura uye iri nani kurongeka mukutungamira kweyekutengesa zvemagetsi
Nepo kune rimwe divi, chokwadi chekuti iri rutsigiro rwe manejimendi uye manejimendi yekambani yako yedhijitari haigone kushayikwa kubva pane urwu Nezve izvi zvinhu, zvinofanirwa kuyeukwa kuti chimwe chezvakakosha mipiro yeiyi yakasarudzika dhata system ndeye izvo zvine chekuita nemamwe mabasa akakosha mukutungamira kwayo. Senge sekuunganidza, kuchengeta uye ronga data kubva kune akawanda masosi eruzivo.
Nepo kune rimwe divi, zvakafanirawo kusimbisa chokwadi chekuti kuburikidza neiyi system sisitimu iri nani kugona kuwana huwandu hwevanopa. Nekudaro, pakupedzisira, mhando inoshanda yehukama hwebhizinesi inogona kuchengetwa kupfuura kusvika panguva iyoyo mune bhizinesi maitiro. Hazvishamise kuti, hombe data inobvumidza irinani kuronga uye nzwisiso yezvikamu zvese zveyekutengesa maitiro mukirasi iyi yemakambani.
Zvakare nekukonzeresa kuitirwa nevatengi kana vashandisi kuti vagamuchire zvakanyanya kutengwa kwezvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvinogadzirwa kubva muchitoro chaiko kana kutengeserana kwepamhepo. Nekuti pakupera kwezuva ndicho chimwe chezvinangwa zvako zvakanyanya mune yako mabhizimisi mazano. Uye izvo zvinogona kuitiswa zvinobudirira kubva kune ino ruzivo system. Iko kushandiswa kunogona kupihwa hakuna basa, kunyangwe padanho rekupinda mumikana yekambani yedhijitari, chero zvayakaita. Kusimbisa iro basa iro dhata hombe rinogona kutamba muzvikamu zvese zveiyi yakaoma manejimendi maitiro.
Ndichiri kune rimwe divi, chokwadi chekuti idzi data dzinogona kuve dzakakosha kwazvo mukugadzirisa kweako e-commerce hazvigone kukanganikwa futi. Nezvikonzero zvakawanda sekutevera izvo zvatinokufumura pazasi:
Iyo inokubatsira iwe kugadzira zviwanikwa zvinogona kufadza zvaunofarira kubva mukuitwa kwayo.
Iyo data inowanikwa kuburikidza neiyi yakasarudzika system haina muganho, asi nekuda kweichi chikonzero chakanyanya kukosha kuti iwe uzive maitiro ekuishandisa nenzira kwayo.
Kutenda kune ino yakazara data system, hapana mubvunzo kuti pakupedzisira unonzwisisa ruzivo rwese zvirinani. Kuve nekukanganisa kufambira mberi kwechitoro chepamhepo kana commerce uye hukama hwayo nevatengi nevashandisi.
Icho chishandiso chinoshanda kwazvo kuitira kuti kubva panguva chaiyo chaiyo iwe unokwanisa kudzidza makwikwi aunayo mukati mechikamu. Kuti uzvimise zvakanaka pamberi pekambani idzi uye zviri shure kwezvimwe zvezvinangwa zvako kubva pakagadzirwa kambani.
Chii chingafarire isu mukushandisa kwako?
Kuita chero mhando yebhizimusi uye nzira dzekutengesa kuburikidza neiyi dhatabhesi dhata inogona kupa inopfuura imwechete mukana mukuvandudza kwako. Izvo zvakakunakira iwe kuti uvazive kuti vazvipfuure ivo kusangano rako uye kugona kuvandudza manejimendi avo zvishoma nezvishoma. Kubva pane ino maonero, hapana zvirinani pane kushandisa nzira iyo inozobvumidza iwe kuti uve wakasarudzika vatengi. Hazvishamise kuti, ndiyo ipfupi nzira yekuwedzera huwandu hwekutengesa kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa.
Kune rimwe divi, iwe haugone kufuratira iyo hombe data ihurongwa hunogona kukutungamira kusevha mari yakawanda mukutungamira kwekambani yedhijitari. Izvi zvinodaro nekuti iwe unogona kukwidzirisa zviwanikwa zvaunazvo mumawoko ako uye kuti nekuzvipira kushoma iwe uchaona kuti zvinangwa zvako zvese zviri kuzadzikiswa sei, kwete pasina kuita kwako.
Senge chokwadi chekuti mukupedzisira iwe unogona kuve nezvimwe zviwanikwa kuti uve nesarudzo yakajeka yemabatiro aunofanira kutarisira iyi kambani kubva zvino zvichienda mberi. Ndichiri kune rimwe divi, zvakare inokupa iwe yakanakisa ruzivo kuti uzive inguva yakanakisa yekumisikidza kupihwa kana kukwidziridzwa. Kana pane zvinopesana, kana zvichidikanwa kukwidza mitengo nekuda kwekudiwa kwauinako kune zvako zvigadzirwa kana masevhisi.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvakare yakakosha kwazvo kune vatengi kutsvaga pakati pevatengesi vechigadzirwa chimwe chete, enzanisa uye sarudza yakanakisa pakupedzisira. Hazvishamise kuti chimwe chezvinhu zvakakosha zve data hombe kubatsira kunzwisisa maitiro evashandisi. Iko kunowana mubatsiri mukuru wezano rekutengesa iri chitoro chepamhepo kana commerce yaunomiririra panguva iyoyo. Nekuti nguva dzose zvinonyanya kukosha kuti uzive zvese nezve vamiririri mune yekutengesa maitiro. Uye kuti iwe unogona kubudirira neiyi dhatabhesi nekubudirira kukuru
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Zvakanakira kushandisa Big Data muCommerce
Mabasa eSocial Media Manager muCommerce